होमपेज / शुक्रबार / त्यागको तुरुप
त्यागको तुरुप	09 Jul 2013 मङ्गलबार २५ असार, २०७०
राजनीतिमा त्यागको चर्चा निकै हुने गर्छ। नेताहरू भाषण गर्दा जनताको 'बलिदान र त्याग'बाट प्राप्त उपलब्धि भन्न कहिल्यै छुटाउँदैनन्। जनताको त्याग र बलिदानको चर्चा गरेर नथाक्ने नेताहरू भने त्यागी हुन नसकेको भन्दै बेलाबेलामा आलोचित हुने गरेका छन्। एकपटक नेता भएपछि जीवनभरका लागि नेतै बनिरहनुपर्ने संस्कार छ, नेपाली राजनीतिमा। दुई–दुई पटक 'ओपन हार्ट सर्जरी' गरेका वयोवृद्ध पनि हामीकहाँ सक्रिय राजनीति गरिरहेका भेटिन्छन्। नेपाली राजनीतिमा सकेसम्म पदमै भएका बेला मृत्युवरण गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लालसा राख्ने पनि थुप्रै छन्। दिमाग र शरीरले साथ नदिए पनि राजनीतिमा रहिरहन खोज्ने प्रवृत्तिका कारण पनि नेपालको राजनीति सायद हट्टाकट्टा हुन नसकेको हो। राजनीतिमा उमेर तथा योग्यताको हदबन्दी नभएका कारण यो चौतारोको मादल जस्तो बनेको छ, जसले जति बेला पनि बजाउने। राजनीति गर्नेहरूको उमेर, क्षमता, दक्षताको विषयमा कसैले प्रश्न उठाउने गरेका छैनन्। जसले बढी गफ दिनसक्छ, ठग्न सक्छ, भ्रम र आश्वासनको खेती गर्न सक्छ, ऊ नै नेपालको सन्दर्भमा असल नेता कहलिन्छ। आर्दश, निष्ठा र सिद्धान्तको राजनीति गर्नेहरू 'सिन' मा कहिल्यै आउन सक्दैनन्। तर, यसपटक नेताको तर्फबाट गरिएको त्यागलाई लिएर राजनीति तरंगित भएको छ। एकीकृत नेकपा माओवादीका उपाध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले केन्द्रीय समिति बैठकमा उपाध्यक्ष पद त्याग गरेको घोषणा गरे। उनले लिखित रूपमा अध्यक्ष प्रचण्डसमक्ष त्यागपत्र बुझाए। यस अघि पनि पार्टीमा तीनपटक पद त्याग गरिसकेका डा. भट्टराईको यो कदमलाई धेरैले राजनीतिक 'स्टन्ट'का रूपमा बुझेका छन्। पार्टी राजनीतिमा उनलाई लामो समयदेखि भोग्दै आएका नेता तथा कार्यकर्ताले डा. भट्टराईको यो कदमलाई आफ्नो स्थान अझै दरिलो बनाउने चालबाजीका रूपमा बुझिरहेका छन्। त्यागपत्र दिएपछि 'न्युज साइट' 'अनलाइन खबर डट कम' मार्फत स्पष्टीकरण दिँदै डा. भट्टराईले आफ्नो इमानदारीमाथि प्रश्न उठाउँदा पीडा हुने बताए। पद र सत्ता नै सबैथोक होइन भन्ने कुरालाई व्यवहारतः स्थापित गर्न त्याग गरेको भट्टराईको स्पष्टीकरणलाई धेरैले पत्याएका छैनन्। पद त्यागको निर्णय फिर्ता गराउन गरिएको प्रयास विफल भएपछि आगामी साउन चार गतेदेखि सुरु हुने विस्तारित बैठकमा एनेकपा माओवादीभित्र देखिएको त्यागको राजनीतिको छिनोफानो हुने आशा धेरैले राखेका छन्। नेपालीमा एउटा कथन छ– 'नमरी स्वर्ग देखिन्न।' डा. भट्टराईको यो कदम पनि यही कथनसँग मिल्दोजुल्दो देखिन्छ। आफू त्यागी भएको देखाउन उनी नेतृत्व तहबाटै पन्छिने निर्णयमा पुगेका छन्। उनको आह्वान छ, निश्चित उमेर पुगेका साथीहरूले स्थान खाली गरेर नयाँलाई ठाउँ दिऊँ। यो अति सुन्दर 'आइडिया' हो। तर, उनको यो सुन्दर विचार 'एक्स्प्लोर' हुन नपाउँदै यसमा काला छिटा पर्न थालिसकेका छन्। डा. भट्टराईले भनेजस्तै ६० वर्ष पुगेकाले पार्टी नेतृत्वबाट पन्छिन थाल्ने र ६५ वर्ष पुगेकाले अनिवार्य अवकाश लिने पद्धति निर्माण हुनसक्यो भने यसले नेपालको राजनीतिमा पनि कम उमेरका पार्टी अध्यक्ष र 'योङ' प्रधानमन्त्री हुने अवस्था आउन सक्थ्यो होला। तर, डा. भट्टराईको यो त्यागपत्र राजनीतिक खेलको नयाँ तुरुप भएको धेरैको आशंका छ। यसलाई चिर्न डा. भट्टराईले अर्को कस्तो त्याग गर्छन् त्यसका लागि भने केही समय कुर्नैपर्ने हुन्छ। अध्यक्ष प्रचण्डभन्दा केही महिनामात्र जेठा उपाध्यक्ष डा. भट्टराईले पद त्याग गरेपछि यसको नैतिक दबाबमा प्रचण्ड पर्छन् भन्ने टीकाटिप्पणी पनि गर्न थालिएको छ। आफू पार्टी अध्यक्ष बन्न नसक्ने भएपछि उमेरको हदबन्दीको मेसो मिलाएर पहिलो तहका सबै नेतालाई अवकाश दिलाउने भट्टराई योजनाको चर्चा पनि उत्तिकै छ। डा. भट्टराईले असल नियतले नै यो कदम चालेको दुहाइ दिए पनि उनको यो कदम संशयको घेरामा परिसकेको छ। अहिलेको राजनीतिक देशकाल नेताहरू पद त्यागेर वैराग्यतिर लाग्ने खालको छैन। त्यसमा पनि देशको ठूलो र शक्तिशाली तथा परिवर्तनको एजेन्डा बोकेको पार्टी भनिएको एनेकपा माओवादीका जिम्मेवार नेताहरू पार्टी राजनीति त्यागेर काशीवासतिर लाग्ने हो भने जनताको परिवर्तनप्रतिको चाहना कसरी पूरा हुन सक्ला? राजनीति गर्न पार्टीको नेतृत्व तहमै बस्नुपर्छ र? डा. भट्टराईले प्रश्न गरेका छन्। उनलाई कुन भूमिका र कसरी क्रियाशील गराउने हो, त्यसको विधि तय हुनुपर्ने उनको माग छ। यसबाट प्रस्ट बुझिने कुरा के हो भने डा. भट्टराई पार्टीभित्र यस्तो भूमिकाको खोजीमा छन्, जहाँ जो कोहीको पहुँच नपुगोस् वा उनको लहरमा कोही बस्न नआइपुगोस्। पार्टी एकीकरणपछि टुप्लुुक्क कुुम जोड्न आइपुगेका नारायकाजी श्रेष्ठसँग डा. भट्टराई 'फेमिलिएर' हुन सकिरहेका छैनन्। टुक्रिएका वैद्य जोडिन आए भने त्यसको असर पनि भोग्नुपर्ने त्रास भट्टराईमा देखिन्छ। एनेकपा माओवादी पार्टी निर्माण र १० वर्षे सशस्त्र विद्रोहको सञ्चालनमा बौद्धिक नेता डा. भट्टराईको अथक परिश्रमलाई कसैले अवमूल्यन गर्न सक्दैन। सातौँ महाधिवेशनबाट उपाध्यक्षमा चुनिएका उनी पार्टी कार्यकर्ता र सर्वसाधारण जनताका लागि पनि आर्दश नेता हुुन्। पढेलेखेका नेताको छवि बनाएका उनको काम गर्ने तरिका भने धुन्धुकारी खालको छ। जतिबेला डा. भट्टराई प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा थिए, त्याग गर्न नसकेको भन्दै आलोचनाको भारीले थिचिएका थिए। अहिले उनले यस्तो बेला त्यागको अस्त्र फ्याँकेका छन्, जसले पार्टी राजनीतिमात्र होइन अन्य तह र तप्काको राजनीतिलाई पनि असर पुर्‍याउने देखिन्छ। मंसिर ४ गते गर्ने भनिएको निर्वाचनका लागि एक ढिक्का भएर लाग्नुपर्ने दल त्यागको राजनीतिमा अल्झेपछि कतै निर्वाचन पनि त्यागिने पो हो कि? नयाँ शंका उब्जिएको छ। डा. भट्टराईको यो कदमले न उनको पार्टी, त्यसको नेतृत्व तथा राष्ट्रिय राजनीति कतै पनि सुखद अवस्था सिर्जना हुँदैन। नेताहरू कुर्सीमा सहमत हुन नसकेर त्यागको 'मुड'मा पुगेर पूर्वप्रशासकहरूलाई सत्ता सुम्पिएको अवस्थामा यस्ता त्यागका शृंखलाले सबै चिज त्यागिने अवस्था आउन सक्छ। त्याग कहिलेकाहीँ आत्मघाती हुन सक्छ। Tweet Leaveacomment Message *
'गाउँको त डनै थिएँ म'हक्की स्वभावकी अभिनेत्री सिर्जना सुब्बा कसैसँग दब्दिनन्। चित्त नबुझेको कुरामा पड्किहाल्छिन्। उनलाई कतिले 'जिद्दी' र 'केटाको जस्तो स्वभाव भएकी' समेत भन्छन्। थिएटर र फिल्ममा जमिरहेकी सिर्जनासँग धनबहादुर खड्का र सजना...	नेपाली फिल्मको कथा गतिलो हुनुपर्‍यो : रामकुमारी झाँक्रीके पाउनुभयो राजनीतिमा लागेर?
आत्मकथा हाबी२०७१ सालमा नेपाली साहित्य बजारमा आत्मकथा खूब बिके। साहित्यका रचनात्मक किताबको चर्चा निकै कम भयो। ठूला मान्छेका 'आत्मश्लाघाुले भरिएका 'आत्मकथाुले साहित्यको बजार कब्जा गर्योक। 'तपाईं कथा सुनाउनुस्, हामी लेखिदिन्छौँु भन्दै...	बाँझो फूलबारी डिलका उपदेशकहरूयस कार्यक्रमका उद्घोषक मित्र मित्रलाल पंज्ञानी अन्तर्यामी हुनुहुन्छ क्यार। त्यसैले त उहाँलाई र सायद प्रलेसका अन्य मित्रहरूलाई लागेछ– खगेन्› संग्रौला सम्मान ग्रहण गर्न आउला र? मित्रलालजीहरूले कल्पना गर्नुभएजस्तै यसमा मेरा...	मलेसिया रोजगारीमा विवादैविवादनेपाली कामदारका लागि मलेसिया पहिलो गन्तव्य हो। खाडी मुलुकमा भन्दा सहज र केही सेवा सुविधा बढी हुन थालेपछि कामदारको रोजाइमा मलेसिया पर्दै आइरहेको छ तर पछिल्लोपटक मलेसियाको रोजगारका विषयमा विवाद...	करकापमा नांगिने होथुप्रै फिल्ममा स्कर्ट लगाएर अभिनय गरेकी अभिनेत्री झरना थापाले 'ओम' लगायत केही फिल्ममा बेडसिनसमेत दिएकी छिन्। बेडसिन दिनेबित्तिकै हिरोइनको आलोचना सुरु हुन्छ भने कतिपय हिरोइनले त्यही आलोचनालाई पनि चर्चामा आउने...	कसरी यति सुन्दर?सुन्दर देखिने चाहना सबैमा हुन्छ। हरेक महिला सुन्दर हुन चाहन्छे। त्यसमा पनि ग्ल्यामर क्षेत्रका महिलाका लागि त शारीरिक सुन्दरता उनीहरूको पुँजी नै हो। त्यसैले उनीहरूले सिँगारपटारमा अलिक बढी नै ध्यान...	पोखरामा 'लभ एन्ड लस्ट'काठमाडौँको सुन्धारामा मुख्य आउटलेट रहेको 'लभ एन्ड लस्ट'ले पोखराको लेकसाइडमा पनि नयाँ आउटलेट खोलेको छ। 'लभ एन्ड लस्ट' सेक्स टोय बिक्री गर्ने नेपाली कम्पनी हो। विश्वबजारमा पाइने विभिन्न भेराइटीका कृत्रिम...	शुक्रबार	अलिकति दोहोरी अलिकति फोहोरीकरिब दुई दशकअघि देशमा दोहोरी साँझको जन्म भयो । कुनै बेला दोहोरी साँझ गायन प्रतिभाका लागि...	पुलिसले किन मार्छ छापा?कुनै बेला प्रहरी कपाल पाल्ने र मुन्द्रा लाउने तन्नेरीको दोहोलो काढ्दै हिँड्यो। पार्क, पोखरी, मन्दिरतिर जोडी...	कस्तो मनोरञ्जन? कसको मजाक?गजब कतिसम्म छ भने सेक्स उद्योग र चलचित्र उद्योग दुवैलाई मनोरञ्जन उद्योग भनेर मान्नेहरू पनि छन्।...	मधेशीको सशक्त भूमिका उतार्न चाहन्थेँ : नाजिर हुसेनरंगमञ्च हुँदै फिल्ममा उदाएका अभिनेता हुन् नाजिर हुसेन। रंगमञ्चमा उनको नाटक हेर्न पुग्नेहरू उनलाई 'अभिनयको जादुगर'सम्म...	भर्खरै...